Liquidation ye-matrimonial regime - Ooreka
Liquidation ye-matrimonial regime — Ooreka
Wokuqhawula umtshato kukhokelela ezininzi zoko, kuquka abo i-compensatory imali evunyelweyo kwaye liquidation ye-matrimonial regime. I imimiselo nemiqathango i-liquidation ye-matrimonial regime ziindleko umsebenzi uhlobo wokuqhawula umtshato: amicable, tort okanye ngenye indlela. Kwi-regime ye-asemthethweni asekuhlaleni kakhulu widely amayelenqe, distinguishes zintathu iindidi impahla yexabiso: Okulungileyo ukwazi: kwimeko apho i-wokuqhawula umtshato, umyeni, watshata phantsi regime ka-zoluntu ukuphumela ukuba acquests, kufuneka anike ubungqina ukuba ifenitshala wakhe kakhulu kunye ukuze ukwazi ukuzithwala kuya kude. Ukugqiba yokuba a enye ifenitshala yi kakuhle obubobakhe, umgwebi luthathela ingqalelo, kubekho uluhlu lweempahla okanye ezinye ubungqina préconstituée, zonke ezibhaliweyo (amagama eencwadi, usapho iirekhodi kunye namaphepha angama-domestic, banking amaxwebhu kwaye ii-invoyisi). Kunokuthi kanjalo admit ubungqina okanye presumption, ukuba ifumanise ukuba lowo utshate naye waba kwi-physical impossibility okanye kwendlela ye-get a ebhaliweyo. Nceda qaphela: ukuba amaqabane yokuthenga i-kwipropati kunye nokumiselwa yokusebenzisa, ukuba eyakho imali omnye mlingane ingaba engaphezu isixa invested yi — zoluntu, ipropati sibonwa a ipropati le mlingane abantliziyo imali ebolekiweyo superior (Cass.
Injongo liquidation ye-matrimonial regime kukuqinisekisa ukuba ngamnye amaqabane ukuba phindela eyakhe ipropati, kwaye kwangoko amaqabane ukwabelana nabo net impahla yexabiso zoluntu (ngokwesiqu izinto, ngokulawulwa deduction eliyingozi). Unxibelelwano lwe imiselwe ku isiseko isiqingatha nganye net impahla yexabiso. Ukuba liquidation ye-matrimonial regime sinakho ukusala a standalone umgaqo-nkqubo, emva ngokumnika wokuqhawula umtshato, wokuqhawula umtshato umthetho uvumela amaqabane ukukhokela ngexesha elinye njengoko wokuqhawula umtshato yi-ngokukhuthaza kwabo ukufumana izivumelwano. Nangona kunjalo, kunikwa-mali stakes kwaye heartburn ngokuzingisileyo phakathi amaqabane emva wokuqhawula umtshato, abaninzi ex-amaqabane confront ngamnye enye rhoqo kwaye ixesha elide phezu liquidation zabo matrimonial regime. Ukuze expedite umgaqo-nkqubo we wokuqhawula umtshato, ummiselo n° — ye-elinesihlanu Kweyedwarha ngowama- kwi-simplification ka-usapho umthetho ivumela ebafazini funani ukwahlulwa ipropati phezu wokuqhawula umtshato. Ukuba akukho amicable isisombululo akunakwenzeka, umgwebi unako ke beka matrimonial regime kufanelekileyo. I-breakdown ka-ethile izinto kwaye ngokufanayo izinto babe ngathi ayixhasi namnye ilula, kodwa kukho amaxesha amaninzi»isiphithiphithi lemveli»ekuhambeni ye-union. Umzekelo: amaqabane baba nako ukwakha izindlu ka-usapho (ngokufanayo okulungileyo) kwi uzibeke belonging ukuba omnye wabo (kakuhle kunye yafikela indlela isipho): kule meko, ufumana umvuzo wabo ngenxa. Umthetho-siseko rewards ngu ukugcina okanye buyisela ungqinelwano ka-yexabiso, ezilinganayo ye-amaqabane kwaye ngokufanayo lemveli. Kumele ibe avoided ukuba, ngexesha lwe imisebenzi, ngokwesiqu zoluntu ngu ukwanda okanye diminished ukuba detriment okanye idolo ka-owakhe lemveli omnye we-amaqabane. I-notary linoxanduva drafting umthetho ka-yokwabelana kwi-zoluntu ubala mbasa, ngokunxulumene imithetho zasekuhlaleni Ikhowudi. Xa i-akhawunti ye-rewards ngu lumisiwe ngasinye amaqabane, ukulingana lwenziwa: ngamnye kufuneka inike ingxelo isixa-mali ngokudibeneyo, okanye ibango kuba intlawulo. Ngokomthetho mutual imvume (wokuqhawula umtshato amicable), i-convention esekwe amaqabane kufuneka kuquka urhulumente liquidating zabo matrimonial regime okanye umzekelo-icatshulwe ukuba akuyomfuneko ukuba imiselwe kwayo ngexesha default ka-ngokufanayo izinto. Ukuba la manyathelo okungenelela a notary-wonke ngu imperative, ke ngoko, ukuba amaqabane kuba building ukuba babelane ezifana owokuqala matrimonial ekhaya.
I-notarial deed kufuneka annexed kwesi sivumelwano ka-wokuqhawula umtshato
I-convention uza kuthatha ukusebenza ngomhla umhla we-filing ye-deed ukuba udidi lemizuzu loluntu notary (ukususela ngojanuwari, ngowama, kwimeko wokuqhawula umtshato ngumthetho wama-yecebiso) okanye yi-iziqinisekiso yijaji yenkundla usapho imicimbi kwimeko-matyala wokuqhawula umtshato. Amanye amaqabane wishing to wokuqhawula umtshato kwi-eyona kunokwenzeka ikhethe ukuphepha imingcipheko enxulumene ziyathengiswa yabo ipropati, abanye khetha ukuba uhlale kuyo indivision ukubeka ngayo ukuqeshisa, okanye vumelani omnye okanye okunye malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-abahlala apho: imimiselo nemiqathango inkqubo edibeneyo ingaba ke esekwe kwi-co-ubunini sivumelwano, ixesha apho akavumelekanga ukuba zingaphezu emihlanu. Qaphela: naliphi na ilinge ubunini isivumelwano enxulumene bengagungqi ipropati kufuneka kanjalo kuba phantsi kwe-notarial act, eya kuba ngokulawulwa upapasho ilizwe. Kwelinye nemigaqo-nkqubo ka-wokuqhawula umtshato, imisebenzi ka-liquidation ye-matrimonial regime ingaba elizimeleyo wokuqhawula umtshato iingxoxo, nkqu ukuba nabo bayakhuthazwa ngumthetho kwaye kuphela intervene kanye wokuqhawula umtshato isigqibo sele kuba zokugqibela. Ukulandelelana non-conciliation ngokubanzi ibandakanya ukuqeshwa a notary ukuseka i-project of liquidation. Inkundla ingayalela onyule umntu elinolwazi ukuzoba phezulu uluhlu lweempahla ukuba uqikelelo ipropati le amaqabane nokwenza iziphakamiso kuba lonke ityala lesi zabo pecuniary izinto ezichaphazela (inqaku ° ka-zasekuhlaleni Ikhowudi). A isihlalo Wenkundla ka-cassation ye-nineteen-kweyedwarha yowama- weza cacisa ukuba le elinolwazi basenokuba a lawyer. Kamva, writ ka-wokuqhawula umtshato kufuneka siqulathe proposal kuba regulation of the pecuniary umdla wokuqhawula umtshato. I-husband, nangaliphi na ixesha lomgaqo-nkqubo, unakho ukufikelela isivumelwano kwaye okokuba i-convention kwi liquidation zabo matrimonial ipropati regime kamva ratified yi-wokuqhawula umtshato isihlalo. Kwi default ka-sivumelwano, wokuqhawula umtshato isigqibo sele kuba zokugqibela uphumelele liquidation ye-matrimonial regime kwaye authorizes owokuqala mlingane ukwenza njalo. Aphinda impahla yexabiso kuba undivided kwaye amaqabane kuba omnye-unyaka libazisa ukuze kuphunyezwe liquidation zabo matrimonial regime. Kwimeko ukungaphumeleli, notary eliphetheyo ye-liquidation uya uthumelo enkundleni uxwebhu esichaza amabango ngamnye umntu ngokuba procès-verbal ka iingxaki.
Esitsha seminyaka ezintandathu uya kunikelwa
Kwi default ka-sivumelwano, notary uza zoba phezulu omtsha imizuzu kwazi bani ukuba uza ukuba amaqabane, ngomsebenzi wabo abaqondisi-mthetho kuhamba phambi komgwebi kuba usapho imicimbi a umgaqo-nkqubo we liquidation ye-matrimonial regime. Akuvumelekanga uncommon kuba le nkqubo rhoqo litigation ngu lengthy kwaye expensive, ingakumbi ukukhanya amanyathelo iinkalo zobuchule wafuna yi-amaqela kuba uvavanyo — tyala lemveli. Ngexesha umtshato, omnye lowo utshate naye, nokuba kunganjalo a ipropati eyeyayo, akavumelekanga ukuba kuqhubeka nge ukuthengisa i-marital ekhaya okanye alahle ngayo ngaphandle nezinye ke imvume. I-marital ekhaya yindlela ebalulekileyo mba ka-wokuqhawula umtshato kwi-kangakanani apho kokuba wenziwe embindini osapho ubomi kwaye ihlala i-kwinto ka-uzinzo kuba abantwana zilandelayo wokuqhawula umtshato. Wokuqhawula umtshato, marital ekhaya ngomnye u-owakhe okulungileyo, ngokufanayo, okanye undivided, ex-amaqabane babe uyavuma ukuba yayo ziyathengiswa, inkululeko nge enye inxalenye enye, okanye, ekugqibeleni, zayo umsebenzi ngo kubo phantsi a edibeneyo ubunini isivumelwano notarized. Failing sivumelwano kwaye ukuba kubalulekile i-owakhe ipropati le omnye lowo utshate naye, ezinye mlingane akavumelekanga ukuba igcine, ngaphandle ishiye umgwebi. Kwi-inzala ka-abantwana, umgwebi ihlala rhoqo kakhulu attentive ukuba elimfiliba ka-owokuqala marital ekhaya ukuba unako imiselwe ku isicelo we-husband: Okulungileyo ukwazi: xa i-eks-mlingane lugqiba ukuba sithenge emva i-isiqingatha share lomnye ukuze bagcine ipropati, izibonelelo ukusuka inkcitho ka-notary ukuphumela, somgaqo-ziyathengiswa ixabiso-propati. Kubalulekile ukwenza umahluko phakathi iminikelo made phakathi amaqabane abo efunyenwe wesithathu amaqela. Kufuneka bazi ukuba wokuqhawula umtshato akusebenzi ngokuzenzekelayo entail i-revocation ka-iminikelo neemfanelo phakathi amaqabane. I-luncedo marital yi lokulingana zifakiwe kwi-isivumelwano womtshato, evumela lwe zoluntu, ngokuthi wokuqhawula umtshato okanye nge-ukufa, inzuzo omnye amaqabane, kwaye ke ngoko ukuba derogate kwi-siseko ngokunxulumene apho uluntu ngu umahlule ngo isiqingatha phakathi amaqabane. Ingaba njalo mbasa njengoko matrimonial izibonelelo: a lokulingana kuba uviko a ipropati kwi-zoluntu, lokulingana ka-unequal lwe zoluntu, abazali»enye zoluntu»regime. Ngokunxulumene inqaku, isiqendu, zasekuhlaleni Ikhowudi, wokuqhawula umtshato ayina nefuthe iminikelo kwaye matrimonial okuninzi abathi bathabathe ukusebenza ngexesha umtshato: ukususela ngojanuwari, umthetho uthatha ukuba bamele irrevocable. Ngoko ke, umyeni ayikwazi ukuthatha emva ebezikuyo onikiweyo, nkqu ukuba babe wokuqhawula umtshato. Ukuba amaqabane kuba amayelenqe regime ye-jikelele zoluntu, imithetho lwe ngabo kwesi regime, oko kukuthi i-ekude lee yonke ipropati: ngamnye mlingane owns nesiqingatha yonke ipropati. Ngo umahluko, wokuqhawula umtshato entails i-revocation ka-ilungelo iminikelo kwaye matrimonial okuninzi abathi bathabathe ukusebenza ngomhla ukuchithwa kwezindlu i-matrimonial ipropati regime, ngokunjalo izibonelelo kwimeko yokufa (unqwenela), ngaphandle kokuba kungenjalo kuvunyelwene ngazo yi-mlingane othe wenza. Oku nokuzinikela ngu appreciated yi-umgwebi ngexesha i-pronouncement wokuqhawula umtshato, apho ke ubhengeze luncedo okanye ulungiselelo irrevocable. Umzekelo: amaqabane kuba yamkelwa ekuhambeni zabo union, regime ye-jikelele zoluntu kunye kweelwimi propati wokugqibela ophilayo. Yabo wokuqhawula umtshato sele zoko kuba liquidation ka-impahla yexabiso ngokunxulumene imithetho enye zoluntu, kodwa ngaphandle epheleleyo entitlement zoluntu kwimeko apho ukufa (ngaphandle kokuba kungenjalo kuvunyelwene ngazo ngexesha wokuqhawula umtshato). Wokuqhawula umtshato ayina nefuthe iminikelo eyenziwe wesithathu amaqela (uninzi rhoqo abazali le umyeni): ngabo irrevocable. I-amaqabane watshata phantsi uluntu regime, nangona kunjalo, kufuneka nakekela ukuba iminikelo ka-sums imali. Eneneni, ukuba ngumzali nge mlingane ngaphandle ukusekwa uxwebhu i-attesting, kwaye ukuba isixa ngu transferred ngaphandle uqukuqelo, kubalulekile ke loluntu, oko kukuthi presumed ukuba zithe rewarded. Ngoko ke, ngelo xesha wokuqhawula umtshato ngenxa yokungabikho ubungqina, mlingane ye-mlingane awarded banelungelo lokufumana lalento isixa-mali